Iithebhu zeFlaekor Flavour (2.5 mg) (Canada)
Eli phepha linolwazi ngeeFabour Flavour Tabs (2.5 mg) ze ukusetyenziswa kwezilwanyana .
Iithebhu zeFlaekor Flavour (2.5 mg) Iimpawu
Izilumkiso kunye nezilumkiso zeTaber flavour Tabs (2.5 mg)
Ulwalathiso kunye nolwazi lwedosi yeeThabhu zeFlavour Flavour (2.5 mg)
Iithebhu zokuvasa i-Fortekor (2.5 mg)
(IBenazepril hydrochloride 2.5 mg, 5 mg, kunye ne-20 mg)
I-DIN 02305232 (2.5 mg), 02220563 (5 mg), 02220555 (20 mg)
Isithako esisebenzayo kwi-FORTEKOR yi-benazepril hydrochloride esisizukulwana sesibini esingesiso-sulphydryl angiotensin esiguqula i-enzyme (ACE) inhibitor. Ukulandela ukulawulwa ngomlomo, i-benazepril hydrochloride ifunxwe kwaye iguqulwe sisibindi kwi-metabolite yayo esebenzayo, i-benazeprilat.
I-Benazeprilat isebenza ngokuthintela i-angiotensin yokuguqula i-enzyme (ACE). Le enzyme yinxalenye yenkqubo ye-renin-angiotensin ye-Cascade kwaye iguqula i-Angiotensin engasebenziyo kwi-Angiotensin II esebenzayo, i-hormone elawula i-vasoconstriction kunye nokukhululwa kwe-aldosterone. Yiyo loo nto i-ACE inhibitors ithintela ukuxinana kwemithambo yegazi, ngaloo ndlela iququzelela ukuhamba kwegazi kunye nokunciphisa uxinzelelo lwegazi.
I-FORTEKOR iboniswe ukulungiselela:
(1) Unyango lokungaphumeleli kwentliziyo kwizinja ezibangelwa kukuphinda kusebenze kwakhona okanye ukunyuka kwentliziyo, ngokudibanisa nonyango oluqhelekileyo.
(2) Njengoncedo kulawulo lokungoneliseki okungapheliyo kwezintso okunxulunyaniswa neproteinuria kwiikati.
Ukusilela kwentliziyo kwiinja:
Elona thamo lincinci licetyiswayo ngu-0.25 mg / kg ubunzima bomzimba, obuza kunikwa kube kanye yonke imihla ngomlomo ngokwale ndlela ilandelayo:
ip 109 500 ipilisi
I-FORTEKOR (2.5 mg)
I-FORTEKOR (5 mg)
I-FORTEKOR (20 mg)
kwenzeka ntoni ukuba ndithatha i-2 meloxicam
I-FORTEKOR inokunikwa kunye okanye ngaphandle kokutya. Ixesha lonyango alinasiphelo. Idosi inokuphindaphindeka, isalawulwa kube kanye yonke imihla, ukuba kugwetywa kufanelekile ngokwezonyango kwaye icetyiswe ngugqirha wezilwanyana.
I-FORTEKOR inokunikwa ngokudibeneyo ne-digoxin, i-diuretics kunye ne-antiarrhythmic drug njengoko kufuneka.
Ukunqongophala kweNtsholongwane engapheliyo kwiikati:
Idosi ecetyiswayo yi-0.5 mg ye-benazepril hydrochloride / kg ubunzima bomzimba, oza kunikwa ngomlomo kube kanye yonke imihla ngokwale ndlela ilandelayo.
Ubunzima bekati (kg)
I-FORTEKOR inokunikwa kunye okanye ngaphandle kokutya. Ixesha lonyango alinasiphelo.
ipilisi engqukuva emthubi e 63
Akukho bungqina bobutyhefu bezintso kwi-FORTEKOR obuye babonwa ezinjeni ngexesha lovavanyo lweklinikhi. Ngenxa yokukhutshwa kwe-biliary benazeprilat, kukho umngcipheko omncinci wokuqokelelwa kwizinja ezinomsebenzi wezintso ongalunganga. Ngesi sizathu, akukho lungelelwaniso lwethamo lwe-FORTEKOR luyimfuneko kwimeko yokungonelanga kwezintso. Nangona kunjalo, njengesiqhelo, kwimeko yokungonelanga kwezintso, kuyacetyiswa ukubeka esweni amanqanaba e-plasma urea kunye ne-creatinine.
Iimpawu ze-hypotension ezinje ngokudinwa okanye i-ataxia zinokuvela kwiimeko ezinqabileyo. Nciphisa idosi yomchamo, ukuba kukho imfuneko.
Ukhuseleko lwe-FORTEKOR aluzange luvavanywe ekuzaleni izinja. I-FORTEKOR ke ayikhuthazwa ukuba isetyenziswe kwiintsimbi ezikhulelweyo ngaphandle kokuba kufanelekile ngomngcipheko / ngomyinge wenzuzo. Akukho datha ifumanekayo kwiincindi zokuncancisa. I-FORTEKOR ke kufuneka isetyenziswe kuphela xa kufanelekile eklinikhi.
I-FORTEKOR inokunyusa ukugxila kwe-plasma creatinine ekuqaleni konyango. Esi siphumo sihambelana nefuthe lokunyanga imveliso ekunciphiseni uxinzelelo lwegazi, kwaye ngenxa yoko ayisosizathu sokuyekisa unyango ngokungabikho kweminye imiqondiso. Njengesiqhelo kwimeko yokungabikho kakuhle kwezintso, kuyacetyiswa ukuba kubekwe iliso kwi-plasma creatinine ngexesha lonyango.
Nangona ingaboniswanga kwiikati, i-benazepril inokubangela i-hyperkalemia kwezinye izigulana zabantu ezingaphumeleliyo kwizintso. Ukubeka iliso rhoqo kwinqanaba le-serum potassium ngexesha lonyango kuyacetyiswa.
I-FORTEKOR inciphise ukubalwa kwe-erythrocyte kwiikati eziqhelekileyo kwiidosi eziphezulu, kodwa esi siphumo asiboniswanga kwidosi ekhuthazwayo ngexesha lovavanyo lweklinikhi kwiikati ezinesifo esinganyangekiyo sezintso. Njengesiqhelo kwimeko yokungabikho kakuhle kwezintso kuyacetyiswa ukuba kubekwe esweni ukubalwa kwe-erythrocyte ngexesha lonyango.
Ukhuseleko lwe-FORTEKOR aluzange luvavanywe kwiikati ezinokungaphumeleli kakuhle kwezintso, ukuqaqamba okungapheliyo kokungaphumeleli kwezintso okungapheliyo, i-hypovolemia, ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni, okanye isifo sentliziyo okanye isifo se-hepatic. Ngexesha lovavanyo lweklinikhi, i-benazepril yalawulwa kwiikati ezinamanqanaba aphezulu e-ALT, ngaphandle kweziganeko ezichaseneyo eziqwalaselwayo.
Ukhuseleko lwe-FORTEKOR aluzange luvavanywe kwiikati ezizalisayo, okanye ukumkanikazi okhulelweyo okanye oncancisayo. I-FORTEKOR ke kufuneka isetyenziswe kuphela xa kufanelekile eklinikhi, kuthathelwa ingqalelo umngcipheko womngcipheko / wenzuzo. I-ACE inhibitors inokubangela ukonzakala okanye nokufa komntwana okhulayo xa esetyenziswe ngexesha lokukhulelwa kwikota yesibini neyesithathu kwezinye iintlobo.
Akukho nxibelelwano lwaziwayo phakathi kwe-FORTEKOR kunye namanye amayeza kwiikati. Indibaniselwano ye-ACE inhibitors kunye nezinye ii-antihypertensive agents (umz. Emntwini, ukudityaniswa kwe-ACE inhibitors kunye nee-NSAIDs kunokukhokelela ekunciphiseni ukusebenza kwe-ACE inhibitor okanye ukungasebenzi kakuhle kwezintso.
Amava Okuvunywa Kwasemva Kokuvunywa:
ungayithatha kangaphi ibuprofen 600mg
Iziganeko ezigwenxa ezinjeni nasezikati zinqabile. Iingxelo ezizodwa zala miqondiso ilandelayo ziye zabonwa, zidweliswe ku-odolo olucothayo lwamaxesha axeliweyo:
Izinja: Ukudinwa, i-emesis, isifo sohudo, i-polydipsia, i-polyuria, ukukhwehlela, i-ataxia
Iikati: ukungakhathali, i-emesis, i-anorexia, urhudo, i-ataxia
Kwiimeko ezinqabileyo kakhulu, ukusweleka kubangelwe ziziganeko ezigwenxa, okanye njengokuqhubela phambili kwesifo sentliziyo okanye isifo sezintso.
Uxinzelelo lwexeshana olunokubuyela umva lunokwenzeka kwezinye iimeko zokudlula ngengozi. Unyango kufuneka lube nokufakwa ngaphakathi kwisisombululo esishushu sesalutonic saline.
1. IiPropacodynamic Properties: I-FORTEKOR iqulethe i-benazepril hydrochloride, iprodrug hydrolysed in vivo to benazeprilat ethintela i-angiotensin eguqula i-enzyme (ACE), oko kuthintela ukuguqulwa kwe-angiotensin engasebenziyo I ibe yi-angiotensin II esebenzayo. I-FORTEKOR inciphisa zonke iimpembelelo eziphakathi kwe-angiotensin II, kubandakanya i-vasoconstriction yazo zombini imithambo kunye nemithambo kunye nokugcinwa kwesodiyam kunye namanzi zizintso. I-FORTEKOR ibangela ukuthintela okungapheliyo kwe-plasma ACE ezinjeni nasezikati, kuthintelo olubonakalayo oluqhubekayo kwiiyure ezingama-24 emva kwethamo elinye. I-FORTEKOR inciphisa uxinzelelo kunye nomthamo wevolumu kwizinja ezinokusilela kwentliziyo, kwaye ikhokelela kuphuculo lomgangatho wobomi kunye neempawu zeklinikhi, ngakumbi ukukhohlela. I-FORTEKOR ikwavelisa ukuncipha okubonakalayo kumaxesha okusweleka xa kuthelekiswa nonyango oluqhelekileyo, oluhambelana nokwandiswa kwexesha lokuphila. Kwiikati ezinesifo esinganyangekiyo sezintso, i-FORTEKOR inciphisa ilahleko yeprotein kumchamo kwaye yehlisa uxinzelelo lwegazi lwenkqubo kunye nolwe-intraglomerular.
2. IiPropacokinetic Properties: IBenazepril ikhawuleza kodwa ayigqitywanga ukufunxwa iphecana lesisu emva kolawulo lomlomo. Ukufakwa kwe-benazepril kuyinxalenye ye-hydrolyzed yi-enzyme ye-hepatic kwinto esebenzayo, i-benazeprilat; i-benazepril engatshintshiyo kunye ne-hydrophilic metabolites akhawunti eseleyo. Iincopho zeplasma benazeprilat yokugxila ifumaneka kwisithuba seeyure ezimbini kokubini kwimeko yokuzila kunye neyokutya. I-Benazepril kunye ne-benazeprilat ziboshwe kwiiproteni zeplasma, kwaye kwizicubu zifunyanwa ikakhulu kwisibindi kunye nezintso. Inxalenye ephambili ye-benazeprilat isuswa ngokukhawuleza, nangona kukho ukongeza isigaba sokuphelisa ukuphela. IBenazeprilat ikhutshelwa ngaphandle ngokulinganayo ngeendlela zombini kunye neendlela zokuchama ezinjeni kwaye ikakhulu ngendlela yeekati. Ulawulo oluphindaphindiweyo lwe-FORTEKOR lukhokelela kuqokelelo oluncinci lwe-benazeprilat kwiplasma; imeko ezinzileyo ifunyenwe kwithuba leentsuku ezine. Ngenxa yendlela yayo yokukhupha i-biliary, akukho mngcipheko umncinci wokuqokelelwa kwe-benazeprilat ezinjeni ezinomsebenzi ongalunganga we-renal. Ngesi sizathu, akukho lungelelwaniso lwethamo lwe-FORTEKOR luyimfuneko kwimeko yokungonelanga kwezintso.
I-FORTEKOR iyanyamezelwa luhlobo ekujoliswe kulo. Kwizinja eziqhelekileyo ukugqithisa ukuya kwi-200 fold kwakungu-asymptomatic.
I-FORTEKOR inikwe ngokudibeneyo ne-digoxin, i-diuretics kunye / okanye iziyobisi ezichasayo ngaphandle kokudibana okungalunganga.
bamba kwi-anus yakho
I-FORTEKOR iyanyamezeleka kwintlobo ekujoliswe kuzo. Kwiikati eziqhelekileyo ezanyangwa nge-10 kunye ne-20 mg / kg / ngosuku unyaka omnye, iziphumo zophando kuphela ezichaphazelekayo zonyusa umthamo we-urine kunye ne-pH kwiikati ezingamadoda kwi-10 kunye ne-20 mg / kg, ukwanda komthamo womchamo kubafazi kwi-20 mg / kg / usuku, kunye nokwehla komchamo othile kumakati nakubantu ababhinqileyo iikati kwi-10 kunye ne-20 mg / kg / ngosuku, xa kuthelekiswa nolawulo lwezilwanyana. Ukulandela umkhondo we-hypertrophy / hyperplasia yeeseli ze-juxtaglomerular kuqatshelwe kwi-histopathology kwiikati ezifumana i-10 kunye ne-20 mg / kg / ngosuku. Ukubaluleka kweklinikhi kolu tshintsho akwaziwa.
I-Fortekor (2.5 mg) -i-beige enencasa, iipilisi ze-ovaloid ezikorwe macala omabini, kwaye ziqulathe i-2.5 mg benazepril hydrochloride. Ipakishwe kwiipakethe zeplastikhi zeplastikhi nganye inezipilisi ezili-14, 2 okanye ezine i-blisters kwipakethe.
I-Fortekor (5 mg) kunye ne (20 mg) -i beige enencasa kumacwecwe akhanyayo ansundu afumene amanqaku kumacala omabini, kwaye aqulathe i-5 mg benazepril hydrochloride (Fortekor 5 mg) okanye i-20 mg benazepril hydrochloride (Fortekor 20 mg). Ipakishwe kwiipakethe ze-aluminium blister nganye iqulethe iipilisi ezili-14. Iipakethe ze-2 okanye ze-4 (5 mg) i-blisters.
Gcina kwindawo engaphantsi okanye engaphantsi kwama-25 ° C. Amacwecwe esiqingatha angasetyenziswanga kufuneka abuyiselwe kwindawo evulekileyo yeblister kwaye afakwe endaweni yebhokisi yekhadibhodi, kwaye isetyenziswe ngaphakathi kweentsuku ezimbini. Khusela iipilisi ze-2.5 mg ekukhanyeni.
Umhla: Isilimela 2020
I-Fortekor, i-Flavour Tabs, i-Elanco kunye ne-logo ye-bar diagonal ziimpawu zorhwebo ze-Elanco okanye abaxhasi bayo.
I-150 LANE YOPHANDO, i-SUITE 120, i-GUELPH, i-ON, i-N1G 4T2
Inkonzo eyenzelwe: 800-265-5475
Indawo yeWebhusayithi: www.revanco.ca
Kwenziwe zonke iinzame zokuqinisekisa ukuchaneka kwe-Fortekor Flavour Tabs (2.5 mg) yolwazi olupapashwe apha ngasentla. Nangona kunjalo, kuhleli kuluxanduva lwabafundi ukuba baziqhelanise nolwazi ngemveliso equlethwe kwileyibhile yemveliso yaseCanada okanye ukufakwa kwephakheji.
iziphumo ebezingalindelekanga zonyango lwe-methadone
ukudibanisa njani ipod kwi-iTunes
Ukugqiba ukuthatha iivithamini